Non-profit: Cloud-based Fundraising 3.0 miaraka amin'i Bloomerang | Martech Zone
Non-profit: Cloud-based Fundraising 3.0 miaraka amin'i Bloomerang
Alarobia, Oktobra 2, 2013 Alatsinainy, 8 Jona, 2015 Douglas Karr
Ny teknolojia fitantanana mpanome vola tsy mitady tombony dia efa ela no namboarina tamin'ny UI drab, UX ratsy ary lafo be. Bloomerang mamadika ny script. Niara-niorina tamin'ny taona 2012 avy amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny 30 taona sy ny teknolojia Jay Love, ny Rindrambaiko fitadiavam-bola miorina amin'ny rahona manampy ireo tsy mitady vola hitantana ny vondron'ireo mpanome.
Aiza Bloomerang manavaka ny tenany no ifantohana fihazonana mpamatsy vola. Na dia misy programa rindrambaiko tsy mitady tombombarotra maro aza mamela ny mpanangom-bola hangataka sy hiditra amin'ny fanomezana, Bloomerang koa dia mamela ny fomba fanao tsara indrindra hitazonana ireo mpamatsy vola ireo. Raha mikaroka ao anaty angona ianao dia voamarina mazava tsara izany fifantohana izany. Ny salanisan'ny taham-pitanana mpamatsy vola dia manodidina ny 40%, izay midika fa isaky ny mpanome 1,000 azo tamin'ny taona 1 dia 400 monja no manome fanomezana faharoa. Izany dia mitentina be amin'ny vola miditra very ho an'ireo fikambanana mpanao asa soa.
Raha vao mipaika ny mpampiasa dia ny ankehitriny taham-pitanana ny mpamatsy vola no zavatra voalohany lazain'izy ireo, mitazona izany ho tampony ho an'ny famoriam-bola rehetra mampiasa ilay rindrambaiko. Bloomerang araho koa ny fandraisana anjaran'ny mpanome tsirairay, ary aseho anao indray mipi-maso ny tsy fivadihan'ny mpanome iray. Ny mpanangom-bola dia afaka mifantoka amin'ireo mpankafy azy be vava na mampiditra indray ireo izay lany. Orinasa nasionaly mpamorona marika sy famolavolana no namorona ny interface, izay maneho ny fiaingana manan-danja sy ankafizin'ny interface tsy misy fanavaozana, ny latabatra izay mahazatra indrindra amin'ireo rafitra fitadiavam-bola.
Miavaka fampidirana media sosialy mamela ny mpampiasa hampiditra ny kaonty media sosialy an'ireo mpamatsy vola azy ireo ary hifandray amin'izy ireo amin'ny alàlan'ny fantsona nofidiny. Ny dikan-tsoratry ny rindrambaiko any aoriana any dia hampiorina ny firotsahan'ny haino aman-jery sosialy amin'ny sehatry ny fifamatoran'ny mpanome. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny retweet, ny tiany ary ny fizarana ny atiny tsy fanananao dia hiditra ao amin'ny Bloomerang.
Bloomerang dia mitady nonprofits kely na salantsalany hampiasa ny rindrambaiko.
Manaova fandaharana Demo!
Tags: bloomerangfiantranafanomezanateknolojia fitantanana mpamatsy volarindrambaiko fitadiavam-bolajay fitiavanatsy mitady tombontsoaTeknolojia fitantanana mpamatsy vola tsy miankina
Twazzup: Fanaraha-maso ny fotoana tena izy ho an'ny Twitter
LucidPress: Fanontana an-tserasera sy fanontana nomerika